Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Mgbazinye ezumike Hawaii adịlarịrị ugbu a
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
N'October, e kwere ka ịgbazinye mgbazinye nwa oge iwu ka ọ rụọ ọrụ na mpaghara Maui yana na Oahu, Hawaii Island na Kauai.
Akọwara mgbazinye ezumike dị ka iji ụlọ mgbazinye, ngalaba condominium, ọnụ ụlọ nkeonwe n'ụlọ nkeonwe, ma ọ bụ ọnụ ụlọ/oghere nkekọrịta n'ụlọ nkeonwe.
Mgbazinye ezumike nke Hawaii na steeti niile kwuru na mmụba dị ukwuu na ọkọnọ, ọchịchọ, ọnụnọ na nkezi ọnụego kwa ụbọchị (ADR) na Ọktoba 2021 ma e jiri ya tụnyere Ọktoba 2020.
Agbanyeghị, ma e jiri ya tụnyere Ọktoba 2019, ADR dị elu na Ọktoba 2021, mana ọkọnọ mgbazinye ezumike, ọchịchọ na ebe obibi dara ada.
Dị ka akwụkwọ akụkọ Mgbazinye ezumike nke Hawaii kacha ọhụrụ si dị, na Ọktoba 2021, ngụkọta ego mgbazinye kwa ọnwa nke steeti ezumike bụ abalị 587,700 (+57.3% vs. 2020, -38.1% vs. 2019) na ihe a na-achọ kwa ọnwa bụ 345,700 nkeji abalị (+ 306.7% vs. 2020, -49.9% vs. 2019). Nke ahụ rụpụtara na nkezi nkeji nkeji kwa ọnwa nke 58.8 pasent (+36.1 pasent vs. 2020, -13.8 pasent vs. 2019) maka October. Ọnụnọ maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ Hawaii bụ 54.9% na Ọktọba.
ADR maka nkeji mgbazinye ezumike steeti na Ọktọba bụ $243 (+16.9% vs. 2020, +26.9% vs. 2019). N'iji ya tụnyere ADR maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ bụ $308 na October 2021. Ọ dị mkpa iburu n'obi na n'adịghị ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ, nkeji na mgbazinye ezumike adịghị adị kwa afọ ma ọ bụ ụbọchị ọ bụla nke ọnwa ma na-anabatakarị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọbịa karịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ omenala. .
N'ọnwa Ọktọba, anabatara mgbazinye obere oge iwu ka ọ rụọ ọrụ na mpaghara Maui yana na Oahu, Hawaii Island na Kauai ma ọ bụrụhaala na ejighị ha dị ka ebe iche.
N’ọnwa Ọktoba 2021, ndị njem na-esi na steeti ahụ na-alọta nwere ike ịgafe ikike ichebe onwe onye ụbọchị iri nke steeti ma ọ bụrụ na agbanyere ha ọgwụ mgbochi zuru oke na United States ma ọ bụ nwee nsonaazụ COVID-10 NAAT na-adịghị mma sitere na Onye Mmekọ Nlebaanya tụkwasịrị obi tupu . ọpụpụ ha site na mmemme Njem Nchekwa.
Data n'ime Ndị njem nleta HawaiiNkwupụta arụmọrụ mgbazinye ezumike nke Hawaii na-ewepu kpọmkwem nkeji ndị akọpụtara na mkpesa arụmọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ Hawaii yana akụkọ nyocha nke nkeji oge nke Hawaii. Akọwara mgbazinye ezumike dị ka iji ụlọ mgbazinye, ngalaba condominium, ọnụ ụlọ nkeonwe n'ụlọ nkeonwe, ma ọ bụ ọnụ ụlọ/oghere nkekọrịta n'ụlọ nkeonwe. Akụkọ a anaghị ekpebi ma ọ bụ ọdịiche dị n'etiti nkeji anabatara ma ọ bụ enweghị ikike. A na-ekpebi n'ụzọ ziri ezi nke ụlọ mgbazinye ezumike ọ bụla na mpaghara mpaghara.
Dịkarịa ala, mmadụ 27 nwụrụ n'ọdachi ụgbọ mmiri English Channel